Ny Fampiasàna Ny Tenifototra Ao Anaty Firenena Iray Mikatsaka Fandriampahalemana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2016 7:48 GMT
Eo amin'ny sary: “Tsy Hisy Fakàna An-keriny Intsony”, “Tsy Hisy Fampihorohoroana intsony”, “Tsy Hisy Fahafatesana intsony”. Sary an'i Camilo Rueda López. Famoahana nampiasàna ny lisansa Creative Commons.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana sy navoak'ilay Kolombiana mpanangona vaovao, Renata Cabrales, tao amin'ny Medium, ary ny dikany navoaka ho an'ny Global Voices dia nahazoana alàlana tamin'ny mpanoratra.
Nohadihadian'i Cabrales nby sasantsasany tamin'ireo endrika sosialy manokana mahakasika ilay fifanarahana fandriampahalemana amin'izao fotoana izao niarahana niketrika mba hampitsaharana ny fifandonana anatiny eo amin'ny Hery Revolisionera Mitam-piadiana ao Kolombia (FARC) sy ny governemanta amperinasa ao Kolombia, izay nahatonga ilay firenena hiaina ady nandritra ny 50 taona mahery.
Fifanarahana nampizarazara ny hevitry ny vahoaka teo amin'ireo Kolombiana nahita ilay dingana ho toy ny filavoana lefon'ny governemanta manoloana ny FARC, ary ireo izay maniry ny handray azy io ho toy ny dingana iray hafa mankany amin'ny firaisam-pirenena, na eo aza ny fahasarotana samihafa. Maneho mazava ny fanohanany ilay dingana mankany amin'ny fandriampahalemana ny mpanoratra ity lahatsoratra ity, saingy alalininy daholo ny fomba nampiasàn'ny andaniny sy ny ankilany ny media sosialy mba hilazan'izy ireo ny heviny, sy ny fomba namoahana ireo tsy fitoviankevitra tety anaty serasera.
Raha misy loka natokana homena ireo teny ‘tenintenenim-poana’ tato anatin'ny taona vitsy tao Kolombia, dia ny ‘fandriampahalemana no hahazo ny loka. Manohina ahy ny milaza izany, saingy dia izay fotsiny izao no zavamisy. Nampiasaina tamin'ny fomba toy itsy na izaroa io teny io, ary na izaho aza dia nampiasa azy hanehoana ny fijoroako manokana manoloana ilay fotoana manantantara niainanay teto Kolombia: fifanarahana iray hampitsaharana ny fifandonana mitam-piadiana amin'ny FARC izay antsoin'ny ankamaroanay, fahatany, hoe “fandriampahalemana.”
Eo anivon'ireo fandrahonana, ompa, fanararaotana, kiana sy fotokevitra mankamamy fikatsahana filaminana, niezaka aho ny handalina ny fomba matanjaka fampiasàna ny tenifototra ataon'ireo Kolombiana, na io fiarovana mibaribary na tsy fitoviankevitra amin'ilay dingana fikatsahana fandriampahalemana mipetraka amin'izao fotoana izao iarahana amin'ny FARC. Avy amin'io fandalinana misafotofoto io, nifototra tamin'izay iainana isanandro vaky sy ireo resaka nifanaovana tamin'ny namana ary mpiara-miasa, toa an'i Rosa Cristina Parra, Carlos García, Perla Toro, sy ireo hafa, namorona ity lisitra manaraka ity aho izay fanalahidy rehefa hifandray amin'ny Twitter ao anaty fotoanan'ny fandriampahalemana.
1. Famoronana sy famolavolàna tenifotora
Mora ny mamorona tenifototra, indrindra fa hoe ny hany ataonao dia ny manoratra teny iray sy mametraka # eo alohany. Ny tena fototra dia ny fahaizana mamolavola tsara. Ary teto no nahadiso anay.
Ny #NoMeResistoALaPaz ( #TsyHanohitraFandriampahalemanaAho, tenifototra iray ho an'ireo manohana ilay fifanarahana fandriampahalemana) dia noforonina mba hanoherana ny #ResistenciaCivil (#FanoheranaSivily, tenifototra ho an'ireo manohitra ilay fifanarahana fandriampahalemana). Manana teny fandàvana roa mampifandiso hevitra ny #NoMeResistoALaPaz : “No” + “Me Resisto” (raha adika, “Izaho Tsy” + “Hanohitra”).
Araka izany, ny torolàlako voalohany dia ity: ataovy tsotra ary mivantana ny tenifototra foroninao. Mazava loatra, raha nosoratana zara fa vita ny tenifototra iray, na misy tsipelina diso, toy ny tranga mahazo ny #ResisteciaCivil (izay latsaka ny “n” amin'ny Resistencia), tsy misy zavatra azo atao aminy.
2. Araraoty ny fahabangàna navelan'ireo mpanohitra
Amin'ny maha-olompirenena – fa tsy amin'ny maha-andrimpanjakana, toy ny @EquipoPazGob (@TeamPeaceGov) – tsara indrindra raha tenifototra tsy manafintohina no iarahana mivondrona. Ohatra iray tsara ny #ResistenciaCivil (#CivilResistance), izay nitambaran'ireo tsy mpankasitraka ilay fifanarahana fandriampahalemana.
Hanaovana inona? Nitambatra izy ireo mba hampiditra votoaty miabo, mba hanosika, mba hanaporofo, mba hanàla sarona sy hanohitra, toy ny nataon'i Rosa @RosaCris. (Ny Sí na “Eny” dia miresaka ilay fitsapankevibahoaka hoavy, izay haneken'ireo Kolombiana “Eny” na handàvan'izy ireo “Tsia” amin'ilay fifanarahana fandriampahalemana)
Se vale explicar lo que SI significa #resistenciacivil pic.twitter.com/W3qknXgCfG
Bitsika: Tsara raha mba misy olona manazava ny dikan'ny ENY #CivilResistance
Sary : “Tsy misy làlana mankany amin'ny fandriampahalemana; ny fandriampahalemana no làlana.” -Gandhi
Tsy misy antoka hoe hadikan'ireo mandray azy (na ny tsirairay io na vondron'olona) ho araka ny tena izy ny torohay noeritreretin'ilay mpampiasa Twitter. Raha ny amin'ireo mpanohitra ilay fifanarahana fandriampahalemana ohatra, ny fahambangàna tavela taorian'ilay resaka fandriampahalemana, ho an'ireo teny manantantara sy mavesadanja toy ny “Civil Resistance” dia tokony ho nampiasaina hitarihana ny fomba fandikàna ilay dingana. Ny tsirairay tsy maintsy mahatsiaro hoe anaty vanimpotoana ifanongoavan-javatra, sy zavamisy ifandrimbonana no iainantsika.
3. Ny tetikady ao andamosin'ilay tenifototra
Ireo mpanohitra ilay fifanarahana fandriampahalemana dia mirona amin'ny fampiasàna tenifototra iray ho toy ny hoe mandray anjara aminà dingana iray ao anatin'ilay fifaninanana hazakazaka am-bisikilety malaza fihodidinana an'i Italia ry zareo: tetikady ampisain-dry zareo ny fifidianana ora iray voafaritra sy fihazakazahana haingana misongona ny ankilany raha vao mipoitra ireo mpampiasa Twitter “mpomba fandriampahalemana”, mivoy mafy mba hamokatra bitsika marobe ho toy ny hery ilaina hitazonana ny hafainganam-pandehan-dry zareo.
Mety ho tombontsoanao ny hampiasa io karazana fandrindràna io raha resaka fiarovana ilay fifanarahana fandriampahalemana. iantohan'io fomba fanao io ihany koa ny maha-tena ilaina ny votoaty avoakanao, misy fitantaràna, tsy manampaharoa ary hahazo mpanjohy marobe ao anaty fotoana fohy, hamela antsika hametraka ny tenantsika ho aminà toerana tsara.
4. Habetsahana sa kalitaon'ny tenifotora.
Rehefa fandrefesana ara-tsosialy no resahantsika, mety handitsoka ny fijerintsika ny resaka angon-drakitra ary hitarika amin'ny fandikàna vilana. Betsaka no tena mavesa-danja amin'ny fiasàny noho izy tsara petrapetraka, noho ny halàliny sy ny zavamisy tamin'ny vanimpotoana namoahana azy. Saingy ny zavamisy tamin'ny vanimpotanan'ilay fifanarahana fandriampahalemana dia mametraka azy ho amin'ny toerana manokana. io no antony, ao anatin'io zavamisy io, tokony tsy hampisafoaka antsika amin'ireo kalitao maro amin'ny votoaty mifandray amin'ny tenifototra iray izay lasa ho fironana iray ao amin'ny Twitter avy eo. Araka ny ambaran'i José Luis Orihuela, manampahaizana iray amin'ny resaka media sosialy, “Diso omena lahja be loatra ny ‘lohahevitra ironana’.” Tena mitombina tokoa io fanambaràna io any anatin'ireo fifandraisana ho an'ny fandriampahalemana.
5. Fitondràna ny tenifototra ho eny an-dàlambe
Raha misy fironana tokony ho ao amin'ny Twitter, amin'ny fotoana rehetra, toy ny fievonana – dia tanisaiko indray i Orihuela – anjaran'ny olompirenena ny màka izay adiny avy amin'ireo tenifototra virtoaly ho eny anatin'ny tontolo hita maso. Tsy amin'ny alàlan'ny tenifototra no ampianarana ny fandriampahalemana, na amin'ny fandefasàna hafatra amin'ny vondrona isankarazany ao amin'ny WhatsApp. Ny fampitàna ny ady isian'ny fandriampahalemana dia mihoatra lavitra noho ny resaka virtoaly ary mandeha miampitampita tànana, arakaraky ny zavamisy amin'ilay vanimpotoana, arahana asa hentitra eny an-kianja, araka ny ambaran'i Rosa Cristina Parra, amin'ny fampiasàna ny “tena tambajotra marina”.
6. Tenifototra lasa lavitra noho ireo olana misy amin'izao fotoana izao.
Misy zavamisy sy tantara miabo marobe manodidina ny fandriampahalemana satria dia misy ireo mpampiasa Twitter no efa vonona sahady hihaino azy ireny raha vintantsika ny mampifandray sy mifampiresaka amin'ireo olona, tsy ampiasàna ny fijoroana amin'ny fotokevitra ideolojika. Tsy tokony hanantena zavatra hitranga isika, toy ny fanambaran'ny andian-taranaka tanora mandao ny ady, vao hanomboka “Tweet-A-Thon” (Hazakazaka amin'ny endrika bitsika). Hendry isika ao anatin'io. Ohatra iray tsara, na dia voasongon'ny hetsika iray amin'izao fotana izao indray aza, ity bitsika manaraka ity:
¡Llegó la hora de la paz! Va ganando la cultura, la dignidad y la vida. Vamos ganando todos porque va #GanandoLaPaz pic.twitter.com/6nXA5ksLrL
Tonga ihany ny fotoana ho an'ny fandriampahalemana nony farany! Nandresy ankehitriny ny kolontsaina, ny fahamendrehana ary ny aina. Nandresy daholo isika rehetra satria #NahazoFandriampahalenana i Kolombia izao
7. Sanatriavo ny hividy tenifototra
Ny zavamisy hoe mitranga koa any anaty media sosialy ny ady ao Kolombia dia fahamarinana tsy azo lavina. Fa izao, ny fandoavana vola mba hahazoana rirany ao anatin'ny lohahevitra saropady iray, toy ny famarànana ny ady mitam-piadiana ifanaovan'ny Kolombiana, dia tsy tokony ho eritreretina na kely aza.
Vao andro vitsy monja izay, nanoratra tao amin'ny bilaoginy i Ricardo Galán, mpanao gazety, momba ireo saribakoly mitapin'ny fihokoana (izay olona karamain'ny governemanta na politisiana hanohana ny fifidianana ny “Eny” ao amin'ny Twitter, raha ny ohatra arosony eto). Na ho ela na ho haingana, dia hiseho masoandro ny fiantraika ratsy ateraky ny fomba fanao tahàka izany amin'ny fahasalaman'ny marika iray, fandraisana andraikitra iray, na olona iray.
La rebelión de los troles II https://t.co/2APkj0u3t1pic.twitter.com/3lfz3XEGmy
Bitsika: Ny fihokoan'ireo mitapy II
Sary: “Nokaramaina itony kaonty itony mba hanoratra fanenjehana an'i Rodrigo Lara, Germán Vatgas, Roy Barreras sy Enrique Peñalosa [izay politisiana manohana ny dingana hisian'ny fandriampahalemana], saingy tsy azonay ny karamanay.”
2 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana